जाडोमा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ? - जाडोमा छालाको स्याहार कसरी गर्ने ?
२०७५, ४ पुष, 10:46:16 AM
काठमाडौं । वातावरणीय हावापानी छालाको हेरचाहका लागि आम मानिसको चासोको विषय बन्ने गर्दछ । मौसम परिवर्तनसँगै हाम्रो छालामा पनि विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले सधैंभरी छालाको उचित स्याहार गर्नु जरुरी हुन्छ । छालामा हुने बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न क्रिम तथा औषधिहरुको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
छालाले हाम्रो शरीरलाई पैतालादेखि शिरसम्म ढाकेको हुन्छ । छालाले शरीरमा बाहिरी संक्रमणबाट जोगाउने, शरीरका अंगहरुलाई ढाकेर सुरक्षा प्रदान गर्छ ।
जाडो याममा छालालाई जोगाउन के गर्ने ?
1.सकेसम्म तातो पानीले ननुहाउने । किनकी तातो पानीले नुहाउँदा छाला खुम्चिने तथा फुस्रो हुन्छ । सके चिसो नभए मनतातो पानीले नुहाउनु राम्रो हुन्छ ।
2.चाया बढी पर्ने समस्या रहेका व्यक्तिले आफूलाई उपयुक्त हुने एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पुले हप्तामा कम्तिमाा दुईपटक टाउको नुहाउने । नुहाउने क्रममा स्याम्फुले कपाल राम्रोसँग मसाज गरेर मात्रै पखाल्नु पर्छ ।
3.नुहाउने साबुनको छनौटमा ख्याल गर्ने । कडा खालको साबुनको सट्टा मोस्चराइजरयुक्त साबुनको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
4.नुहाएपछि नरम कपडाले शरीर पुस्ने । तर धेरै सुख्खा हुने गरी वा छाला रगडिने गरी पुस्नु हुँदैन ।
5.जाडोमा छाला तुलनात्मक रुपमा बढी फुस्रो हुने भएकाले मोस्चराइजरयुक्त बडी लोशन लगाउने ।
6.चिसो भएर भनेर पानी कम खाने गरिन्छ । सकेसम्म पानी धेरै पिउने नभए रसिलो फलफूल तथा झोलिलो खाना बढी खाने ।
7.बाहिर निस्कँदा हातमा ग्लोब्स, खुट्टामा मोजा, मुखमा माक्स तथा चस्माको प्रयोग गर्ने ।